"Calaamadda sharka" sheeko halkaas oo gacan ku dhiiglaha laga helay iyadoo ay ugu wacan tahay iPhone X. | Wararka IPhone
"Raadka sharka", waa sheeko meesha laga helo dilaaga iyadoo lagu mahadinayo iPhone X.
Toni Cortés | | iPhone X, dhowr
Caadi ma aha in laga faalloodo sheekooyinka khiyaanada iyo dilka ee ku saabsan barta tiknoolajiyada ee ku wareegsan koonka Apple. Waxaan had iyo jeer sameyneynaa dib u eegis, ka faallooneyno wararka hadda jira ee ku saabsan aaladaha tufaaxa, codsiyada, cusbooneysiinta, qaraarada shaashadda iyo kun xog farsamo.
Shalay waxaan dhameeyay aqrinta sheekada «Raadinta xumaanta»Laga soo bilaabo qoraaga Madrid Manuel Ríos San Martin. Waxaan isku dayi doonaa inaan sharaxo ma qaswade sababta aan kuugu martiqaadayo inaad aqriso.
Bishii Janaayo 2017, Manuel Rios daabacay sheekadiisa koowaad, "Wareegyo". Riwaayad booliis oo TV-ga tartame ku dhinto kaamirooyinka hortooda. Shabakadaha bulshada ayaa door weyn ka qaata, maaddaama akhristaha uu la macaamili karo shabakadaha bulshada iyo marin u helka macluumaadka khadka tooska ah si uu ula socdo qisada sheeko xariirta.
Bishii Juun ee la soo dhaafay, wuxuu daabacaa buugiisii ​​labaad, "Raadkii xumaanta." Riwaayad kale oo dambi baadhe ah oo bilaabata markay wiilasha qaarkood helaan meydka gabadh dhalinyaro ah oo laga qoday godka Atapuerca, Qabuuraha Neardenthal oo jilaya jilitaan duug ah oo kumanaan sano ka hor la sameeyay. Saddex baarayaal ayaa qaata kiiska, maadaama ay aad ugu egtahay mid ay lix sano ka hor ka tageen oo aan la xalin.
Ilaa hadda, sheeko madow sida boqolaal ka dhex socda dukaamada buugaagta iyo maktabadaha, iyo beryahan dambe, iyada oo loo marayo bogag u gooniya iibinta buugaagta. Waxaan faallo ka bixiyaa buuggan, maxaa yeelay kuwa "ku xiran" qalabka Apple waxay leedahay nimcadiisa. Riwaayadda oo dhan waxay leedahay tixraacyo cad, qaar farsamo ahaan u fiican iPhone iyo shaqooyinkeeda leh iOS. Waxay helayaan taleefanka gacanta ee dhibbanaha maalin kadib markii la aasay, iyo markay arkaan inuu yahay mid cusub iPhone X, booliisku waxay weydiisteen garsooraha inuu u qoro iyada si ay taleefanka u furto .. ¡iyada oo loo marayo Aqoonsiga Face!
Ma shaacin doono haddii ay guuleystaan ​​iyo in kale. Waxaa jira sharaxaad aad u faahfaahsan oo ku saabsan nidaamka aad isticmaasho Apple aqoonsiga wajiga. Waxaad u sheegi kartaa cabitaanka tufaaxa inuu dhex maro xididdada qoraha. Ugu dambeyntiina, waxay maareeyaan inay ogaadaan cidda uu gacan ku dhiiglaha u mahadceliyay ... mid kale iPhone X.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » "Raadka sharka", waa sheeko meesha laga helo dilaaga iyadoo lagu mahadinayo iPhone X.
Tani waa waxa ay Samsung ku xallisay Galaxy Fold oo la filayo bisha Sebtember
WhatsApp wuxuu noqon doonaa mid isweydaarsi iyo daruuraha si dhakhso leh